တာချီလိတ်သို့အလုပ်လုပ်ရန်ထွက်ခွာလာသော လိုက်ထရပ်ချောက်ထဲကျ ၉ ဦးသေဆုံး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မလှိုင်မြို့နယ်မှ တာချီလိတ် မြို့နယ်သို့ အလုပ်လုပ်ရန်ထွက်ခွာလာသော
မလှိုင်မြို့နယ်၊ ဆည်တိုရွာနေ ဦး--စက်တင်ဘာ၁၄ ရက်နေ့ နံနက်၁၀း၃၀ အချိန် မောင်းနှင်လာသည့်
၇က/xxxx လိုက်ထရပ်ယာဉ်သည် ကျိုင်းတုံ-တာချီလိတ်ပြည်ထောင်စုကားလမ်း၊
မိုင်တိုင်အမှတ်(၅၉/၆၀)ကြား၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ ဆွတ်ပလောင်းကျေးရွာအရောက်တွင် လမ်း၏ယာဘက်၊
ပေ(၅၀)ခန့်နက်သည့် နမ့်လုံချောင်းအတွင်းသို့ထိုးကျသွားခဲ့ရာခရီးသည် ၉ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရဲဇာနည်မှသိရသည်။
ထိုသို့ထိုးကျသွားသဖြင့် ယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည်(၂၃)ဦးအနက် ကျား ၂ ဦး၊ မ ၅ ဦး၊ ကလေး ၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း(၈)ဦးမှာ
အခင်းဖြစ်နေရာတွင်သေဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူများအား မိုင်းဖြတ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ကုသစဉ် အမျိုးသမီး ၁ ဦး ထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကျန်ရှိသည့်ခရီးသည်(၁၄)ဦးအနက် မိတ်္ထီလာမြို့၊ ရွှေတောရွာနေ ဗလ(ခ)ထွန်းထွန်းနိုင် (၂၉)နှစ်နှင့်အမျိုးသမီး ၁ ဦးတို့တွင် ဦးခေါင်းထိမိပြီး သတိမရဘဲ
ယာဉ်မောင်းကျန်ါ (၁၂)ဦးတွင် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများအသီးသီးရရှိခဲ့သောကြောင့် ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ ဦး---အား မိုင်းဖြတ်မြို့မရဲစခန်း
ယာဉ်(ပ)၁၁/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၃၇/၃၃၈/၃၀၄-ကဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားကြောင်း သိရှိသည်။
ဒုတိယအဖြစ်နဲ့သာ ကျေနပ် နှစ်သိမ့်ခဲ့ရသည့် မြန်မာ ယူ -၂၃ ဘောလုံးအသင်း
ဖိုင်နယ်ပွဲဖြစ်တာနဲ့အညီ မြန်မာ ယူ၂၃ နှင့် မလေး ယူ ၂၃နှစ်သင်းစလုံး ဖလားကိုင်မြောက်နိုင်ခွင့်အတွက် အစွမ်းကုန်ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာအသင်းကတော့ အဓိက ကစားများစုံလင်စွာနဲ့ ပွဲထုတ်လာခဲ့ပြီး၊ ချန်ပီယံမှတ်တမ်း တင်နိုင်ရေးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သလို၊
မြန်မာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌကြီး ဦးဇော်ဇော်ကလည်း ကိုယ်တိုင်တက်ရောက် ကြည့်ရှု့ အားပေးခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါသည်။
ပထမ ပိုင်းအစလောက်မှာ မြန်မာအသင်းက မလေးအသင်းဘက်ကို ဆက်တိုက် ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့၊ ပွဲချိန် ၁၀ မိနစ်အကျော်မှာတော့
မလေးအသင်း၏ တန်ပြန်ထိုးဖောက်မှုတွေကို ခံနေခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာနောက်တန်းတွေရဲ့  ဖြတ်ထုတ်မှု အနေအထားကလည်း ပရိတ်သတ်တွေအတွက်
ရင်ခုန်စရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ မိနစ် ၃၀ လောက်မှာ မလေးရှားတိုက်စစ်မှုးမှ ဧရိယာထိပ်မှ ကန်သွင်းတဲ့ ဘောလုံးကို မြန်မာဂိုးသမား. ပြည့်ဖြိုးအောင်
ပုတ်ထုတ်ကာကွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို မလေးရှားတိုက်စစ်မှုးက အသာအယာပိတ်သွင်းယူလိုက်တဲ့အတွက် မလေးအသင်းက ပွေဆော်ဦး ဂိုးကို ရယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်.။
ဂိုးပေးရပြီးနောက် မြန်မာအသင်း တောင်ပံတွေကနေ ချေပဂိုးရရှိရေးအတွက် ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်လာတာကို မြင်တွေ့ရပြီး၊ အဆုံးသတ် လိုအပ်မှု နဲ့ အခင်းအကျင်းလိုအပ်မှုတွေကြောင့်
ဂိုးအဖြစ် မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီနောက်မှာလည်း မလေးအသင်း ဆက်တိုက်ဖိကစားလာပြီး ဂိုးသွင်းပြီးနောက် ထောင့်ကန်ဘော ၄ ကြိမ်လောက်တိတိ ဆက်တိုက်ကန်ရသည်အထိ
မြန်မာအသင်း ဂိုးပေါက်ကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါသည်။ ဒီနေ့မလေးရှားအသင်းကတော့ အမြင့်တင်ဘော များနှင့် အသုံးပြုကစားတာလို့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပထမပိုင်းအပြီးမှာတော့
မလေးအသင်းက မြန်မာအသင်းကို ၁ ဂိုးအသာနဲ့ အနိုင်ရလဒ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း မြန်မာအသင်းအနေဖြင့် ချေပဂိုးရရှိဖို့ ပိုမိုကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်လာခဲ့ပြီး၊ ဒုတိယပိုင်း မိနစ် ၆၀ လောက်မှာ ကျော်ကိုကို တကိုယ်တည်း တောင်ပံကနေ ဆွဲပြေးကန်သွင်းယူခွင့်ရသည့် အခွင့်အရေးသာ
ဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့မည်ဆိုရင် မြန်မာအသင်း ချေပဂိုးစောစောရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ၆၅ မိနစ်လောက်မှာ ရန်အောင်ဝင်းနေရာမှာ သက်အောင်ကို ထည့်သွင်းပြီး တိုက်စစ် ကို ပိုမြင့်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ ဂိုးသမား ပြည့်ဖြိုးအောင် အသည်းအသန်ကာကွယ်နေရတာကို မြင်တွေ့ရသလို၊ နောက်တန်းကစားတွေကလည်း အကောင်းဆုံး ကစားနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မိနစ် ၇၀ ကျော်မှာ မြန်မာအသင်း
အနေဖြင့် ချေပဂိုးရရှိဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်မြန်မာအသင်းဟာ မလေးရှားအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ၀မ်ဇက် နံပါတ် (၁၀) ရဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေကို အသန်းအထန်ဖျက်ထုတ်နေရပြီး၊ မလေးအသင်းဟာလည်း
ကျော်ကိုကိုနဲ့ ကျော်ဇေယျာဝင်းတို့၏ ထိုးဖောက်မှုကို အသန်းအထန်ဖျက်ထုတ်နေရပါတယ်။ ပွဲပြီးချိန် ကပ်လာနဲ့အညီ ဂိုးရရှိရေး အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားနေကြတာမို့ ပွဲဟာကြည့်ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ မိနစ် (၈၀) လောက်မှာ မလေးရှားအသင်းက နောက်တန်းခံစစ်သမားများကို အစားထိုး လဲလှယ်ကာ ဂိုးမပေးရရေး ခံစစ်တင်ခဲ့သသလို၊ မြန်မာအသင်းအနေဖြင့်လည်း အနိုင်ဂိုးသွင်းထားဖူးတဲ့ စိုးကျော်ကျော် ကို ၇န်လင်းအောင်နေရာမှာ အစားထိုးပြီး တိုက်စစ်မြင့်ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲပြီးချိန် ၁ မိနစ်ခန့်အလိုမှာ မြန်မာ နောက်တန်းရှင်းထုတ်တဲ့ ဘောလုံးဟာ မလေးအလယ်တန်းကို ထိပြီး သူတို့တိုက်စစ်မှုးဆီကို ချပေးသလိုဖြစ်တာကြောင့်
အဆုံးသတ်သေချာတဲ့ မလေးရှားတိုက်စစ်မှုး ဖာဇိုင်း နံပါတ် (၁၅) က အသာအယာ သွင်းယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာတော့ မြန်မာအသင်း ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီး ၅ ကြိမ်မြောက် မာဒေးကားဖလားကို ကိုင်မြှောက်ခွင့်လည်း ဆုံးရှုံး ခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာအသင်းကတော့ ယနေ့ပွဲမှာ အကောင်းဆုံးအနေအထားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သော်လည်း ဒုတိယဆုနဲ့သာ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခဲ့ရကြောင်းပါ...။ ရွှေတံဆိပ်အတွက် လိုအပ်သေးကြောင်း သင်ခန်းစာတွေလည်းရခဲ့ပါပြီ။ ဆက်လက်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုသေးသလို နောက်လာတော့မည့်အိမ်ကွင်းမှာတော့အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကာ...ဝေးကွာနေတဲ့ အမိ မြေအတွက် ရွှေမျှော်လင့်ချက်လေးကို အသက်သွင်းပေးနိုင်ကြစေချင်ကြောင်းကို အသိပေး သုံးသပ်မိရင်း နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲ မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ရေးသားတင်ပြမိပါတော့သည်။
Hack ခံလိုက်ရသည့် သင့်၏ Facebook Account အားဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ
အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း Facebook ဆိုတဲ့ လူမှုရေးကွန်ယက်ကြီးကို ၁ ဘီလီယံကျော်သော လူအများက စွဲလန်းခုံမင်စွာ သုံးစွဲနေကြပါတယ်။ အသုံးလိုလို့ သုံးစွဲတာထက် စွဲလန်းမှုဖြင့် သုံးစွဲတာက ပိုများလာနေပါတယ်။ ဖုန်း ၊ တက်ဘလက် ၊ ကွန်ပြူတာ ၊ လက်တော့ပ် စတဲ့ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့ နေရာတကာမှာ မျက်စိနောက်လောက်အောင် Facebook မှ Facebook ပါပဲ။
ကဲဒီလောက်တောင် စွဲလန်းနေရတဲ့ သင့်ရဲ့ Facebook ဟာ ဘယ်လောက်တောင်မှ လုံခြုံပါသလဲ။ သင့်အနေနဲ့ ကံအကြောင်းမလှလို့ hack ခံလိုက်ရပြီဆိုရင် ဘယ်လိုများ လုပ်ကြမလဲ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မထိခိုက်ပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ အတော်လေး ထိခိုက်ရမှာ သေချာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Facebook ဆိုတဲ့ “ဆေး” စွဲနေသူများက ပိုခံရပါလိမ့်မယ်။
Facebook ကို hack အလုပ်ခံရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ပေါ့ဆမှုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အကယ်၍သာ သင့်ရဲ့ Facebook ကို hack လုပ်ခံလိုက်ရပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ပါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး ပြန်လည်ရယူဖို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၂ - “My Account is Compromised” အား နှိပ်ပါ။
အဆင့် ၃ - စာမျက်နှာ ဘယ်ဖက်အောက်ထောင့်ရှိ “I can’t identify my account” အား နှိပ်ပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို " ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးဘာသာရေးဆု " မဲပေးရွေးချယ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ပေးတဲ့ မှတ်ချက်များ
ဗုဒ္ဓဘာသာကို " ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးဘာသာရေးဆု " မဲပေးရွေးချယ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိုင်စီအေအာရ်ယူအက်စ် ညွှန်ကြားရေးမှုး " ဟန်.စ် ဂရိုလီချင် " ရဲ့ မှတ်ချက်ကတော့ ........"..စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက ရွေးချယ်ရမယ့် စံသတ်မှတ်ချက်များ ချပြလိုက်တာနဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် အများအပြားဟာ မိမိတို့ ရဲ့ ဘာသာကို မရွေးချယ်ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ရွေးချယ်ကြခြင်းပါပဲ ။ဗုဒ္ဓဘာသာ ဦးရေ အနည်းငယ်သာ ပါရှိတဲ့ ဒီအဖွဲ့ အစည်းက ဒီဆုကို ရတယ်ဆိုတာ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ၊ ရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ် ။ ".......တဲ့ ။ အိုင်စီအေ အာရ်ယူအက်စ် အဖွဲ့ ရဲ့ သုတေသန ညွှန်ကြားရေးမှုး " ဂျွန်နာဟာတ် ( Joona Hult )" က ပြောတာကတော့ ....."..ဗုဒ္ဓဘာသာက ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံးဆုရတာဟာ ဆန်းတော့ မဆန်းပါဘူး ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ စစ်ရယ်လို့ဘယ်လို သာဓက တစ်ခုမှ ရှာမရနိုင်ခြင်းကြောင့်ပါ ၊ စစ်ထဲ လိုက်ဖူးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းကြီး တစ်ပါးပါးကို တွေ့ ရဖို့ ဆိုတာ ရှာမှရှားပါပဲ ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာယှဉ်လို့ မရလောက်အောင်ပဲ သူတို့ ပြောတဲ့ ဟောတဲ့အတိုင်း ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ."..........တဲ့ ။ ဒီဆုရွေးချယ်ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဲလ်ဖတ်စ်မြို့ က ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီး " တက်အိုရှောင်နတ်ဆီ " ပြောတာကတော့ ......".ကျွန်တော်က ကက်သလစ် ဂုဏ်းတော်ကို ချစ်ကြည်ညိုပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းစာထဲမှာ မေတ္တာ ထားကြဖို့ ဟောကြားပြီး တခြားလူတွေကို သတ်ဖို့ ကျတော့ အလိုတော်အတိုင်း ပြုရတယ် ဆိုတာမျိုးကတော့ ကျွန်တော့်ကို အမြဲပဲ အလွန် စိတ်ရှုပ်စေပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ကျွန်တော့မဲကို ပေးခဲ့တာပါ ။"......တဲ့ ။ ပါကစ္စတန်က ဘာသာရေးဆရာ " တာလ်ဘင်ဝါဆတ် " ကလည်း ......".ဒေါသ အမျက်တွေနဲ့သွေးထွက် သံယို ဖြစ်မှုတွေအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာက အဖြေ ရှာပြီးသားဖြစ်တယ် " .........လို့ မှတ်ချက်ပေးပါတယ် ....။ ဂျေရုဆလင်က ဂျူး ဓမ္မဆရာ " ရှမြူယယ်ဝပ်ဆာစတိန်း" ကလည်း ......."ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော် ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာအရ ၀တ်ပြုဆုတောင်း မပြုမီမှာ နေ့ တိုင်း ၀ိပဿနာကမ္မဌာန်းထိုင်လာတာ ၁၉၉၃ ကတည်းကပါ ။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် ။".........တဲ့ ။.....ဒါတွေကို အထောက်အကူ သာဓက ပြုနေရတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်သုဉ်းရေးကို ဦးတည်နေတဲ့ ဘာသာရေး မဟုတ်ဘူး ၊ စစ်ပွဲတွေ ၊ သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ ကင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုကို ကိုယ်သိမျက်မှောက် ခံစားနိုင်ရေးဆီ ဦးတည်နေတဲ့ ဘာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အခြားဘာသာဝင်ကြီးတွေကတောင် အသိအမှတ်ပြုထားတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်စေဖို့ ပါ ။ ( မူရင်းကို အပြည့်အစုံ ကြည့် လိုတယ် ဆိုရင်တော့ ( WWW.sikhpilosophy.net/ ) မှာ အမြဲ လွှင့်တင်ထားပါတယ် ) ....။( ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ -တောင်စွန်း )
မူရင်း SweSwe Winn
ညောင်ဦး ဆယ်လံကျွန်းတွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ၀င်ကာ ကမ်းပါးပြိုလာသည့်အတွက် ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်
ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီမြစ် အတွင်းရှိ အရှေ့ဆယ်လံကျွန်းရွာတွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ၀င်ရောက်ကာ ကမ်းပါးပြိုနေသည့် အတွက် ပြောင်းရွှေ့ကယ်ဆယ်ရေးကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဦးဆောင်ကာ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များက စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် သွားရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
"ရွာအရှေ့ပိုင်း ကမ်းပါးက ပြိုလိုက်လာတယ်။ အိမ် ၁၂ လုံးကုန်းဘက်ကို မနေ့က ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရတယ်။ အရင်နှစ်က အိမ်သုံးဆယ်လောက် ကမ်းပါးပြိုလို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသေးတယ်" ဟု ဆယ်လံရွာမှ ဦးမြင့်စိုးက ပြောကြားသည်။
"ရေ၀င်တာက အတော်မြန်တယ်။ တချို့က ပေကပ်ပြီး မလိုက်ချင်ကြဘူး။ အန္တရာယ်များလို့ မနည်းလိုက်ဖို့ ပြောနေရတယ်" ဟု ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဆယ်လံကျွန်းရွာသည် အိမ်ခြေ ၂၂၈၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၂၄၇ စု၊ လူဦးရေ ၁၁၀၀၊ နွားကောင်ရေ ၃၀၀၊ မြင်းငါးကောင်၊ ၀က်ကောင်ရေ ၂၀ နှင့် ကြက်၊ ဘဲများရှိကြောင်း၊ စက်လှေများ၊ ဇက်များဖြင့် သွားရောက် ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်ကာ ညောင်ဦးဘက်ကမ်းရှိ နတ်ထောင့်ကျောင်းနှင့် အနီးတစ်ဝိုက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် ယာယီနေထိုင်နိုင်ရေး စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဧရာဝတီ မြစ်ရေသည် ညောင်ဦးမြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ တိုင်းထွာချက်များအရ ၂၁၄၅ စင်တီမီတာသို့ ရောက်ရှိကာ စိုးရိမ်ရေမှတ် ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ညောင်ဦးမြို့၏ စိုးရိမ်ရေမှတ်မှာ ၂၁၂၀ စင်တီမီတာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(ညောင်ဦးမြို့နယ် အရှေ့ဆယ်လံကျွန်းရွာမှ သက်ကြီးရွယ်အို များအား ရွေ့ပြောင်းနေစဉ်)
၁၄.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၂၀၀၀ အချိန် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊
ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း(အောက်)နေ ဦးနိုင်လင်းအောင်(ဘ)ဦးစောမြင့်သည် တိုက်လှေခါးရင်းတွင်ထားသည့် မော်တာဖြင့် တတိယထပ်ရှိ
နေအိမ်ခန်းသို့ရေတင်စဉ် မော်တာမှာ အပူရှိန်လွန်ကဲပြီး
၀ါယာရှော့ဖြစ်ကာ မီးခိုးများထွက်လာခဲ့သဖြင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ
ရောက်ရှိ ရှင်းလင်းခဲ့၍ ၂၀၁၅ အချိန် ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့
အဆိုပါ မော်တာဝါယာရှော့ဖြစ်မှုကြောင့် တန်ဘိုးငွေကျပ်(၁၀၀၀၀)ခန့်
ဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် လျှပ်စစ်မီးပေါ့ဆစွာသုံးစွဲသူ ဦးနိုင်လင်းအောင်အား ပန်းဘဲတန်းမြို့မရဲစခန်း (ပ) ၂၉၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၈၅ ဖြင့်
Siri လို့အမည်ရတဲ့ Apple ရဲ့ Voice Command App ( Intelligent Personal Assitan) ဟာ အောင်မြင် ပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့ အလားတူ App မျိုးကို Windows Phone တွေမှာလည်း မြင်တွေ့ ရတော့မှာပါ။
Microsoft ဟာ သူ့ရဲ့  Windows Phone 8.1 မှစလို့ ဖုန်းအသုံးပြုသူကို အထောက်အကူ ပြုပေးမယ့် Personal Assitant ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်မျိုးကို ထည့်သွင်းပေးတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူ့ကို Cortana လို့ အမည်ပေး ထားပါတယ်။ Samsung မှာလည်း Voice Command ပါဝင် ပါတယ်။ Apple မှာလည်း Siri ပါဝင် သလို Nokia တုိ့လို Windows Platform သုံးတဲ့ ဖုန်းများမှာလည်း အကူအမျိုးသမီး တစ်ဦးပမာ ပါဝင် လာစေဖို့ စတင် အကောင်အထည်ဖော်ခြင် ဖြစ်ပါတယ်။ Cortana ဆိုတာ Halo ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကောင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါ။ ပုံမှာ မြင်တွေ့ ရသလိုပဲ အပြာရောင် အသွင်အပြင်နဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုတော့ မှောင်နေချိန် မှာဆိုရင်တော့ လှန့်စရာပါပဲ။ Siri ကတော့ ရုပ်မပေါ်ပါဘူး။ Cortana လည်း ရုပ်ပေါ်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ZD net အနေနဲ့ Imagine လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပြသ ထားခြင်းပါ။ Windows Phone OS မှာတင်မကပဲ Windows PC, X box တို့မှာပါ ထည့်သွင်း အသုံးပြုစေမယ့် Feature ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
Voice Command အများစုက အင်တာနက်ဖွင့်ထားမှာ ကောင်းကောင်း အသုံးပြုတာပါ။ ဘာသာစကား ပါဝင်မှု Feature ကလည်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီအလိုက်ကွဲပြားနေပါသေးတယ်။ သေချာတာကတော့ မြန်မာလို အသံနဲ့စေခိုင်းလို့ရမယ့် App ကတော့ ဖြစ်လာအုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Voice ကို Processing လုပ်လို့ Respond လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Software တစ်ခုဖြစ် လာဖို့ဆိုတာ အင်မတန် ခဲယဉ်းပါတယ်။ Nokia ကို ဝယ်ယူ လိုက်ပြီး ဖြစ်တဲ့ Microsoft ဟာ Nokia Lumia မှာပဲ Cortana ကို စတင် ထည့်သွင်း စမ်းသပ်သွားဖွယ် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ကော့သောင်းအကျဉ်းထောင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် နှိမ်နင်းမှု ၁ ဦးသေ၊ ၇ ဦး ဒဏ်ရာရ
ကော့သောင်းမြို့က အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းသားတွေ ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့် လုံခြုံရေးက ပစ်ခတ်ထိန်းသိမ်းရာမှာ အကျဉ်းသား ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၇ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။
မနေ့က ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ ကော့သောင်းအကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ အကျဉ်းသားတွေ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး ထောင်ဖေါက်ထွက်ပြေးကြတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ မြို့ခံတစ်ဦးက RFAကို ပြောပါတယ်။
ဒဏ်ရာရသူတွေကို ကော့သောင်းမြို့ ဆေးရုံမှာတင်ထားရကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကော့သောင်းမြို့ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ဖြေဆိုဖို့ငြင်းဆန်ပါတယ်။
ငွေပေါပေါသုံးပြီးခရီးသွား လိုသူများအားမျှော်ကိုး၍ ဂျပန် နိုင်ငံ ကျူရှူးမီးရထား Nanat suboshi (ကြယ်ခုနစ်ပွင့်)ကုမ္ပဏီမှ စူပါဇိမ်ခံမီးရထားအသစ်တစ်မျိုး ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
သစ်သားဖြင့် မွမ်းမံထား သော အိပ်ခန်းအကောင်းစား၊ ခုတင်များနှင့် စာရေးစားပွဲအပြင် ရေပန်း၊ ရေချိုးခန်းနှင့်တွဲလျက် သန့်စင်ခန်း အပူပေးထိုင်ခုံများ ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
ကျူရှူကျွန်းတောင်ပိုင်း ကျေးလက်ဒေသတစ်ဝိုက်တွင် သုံးညအိပ်လေးရက်စုံတွဲတစ်တွဲ လျှင် ယန်း ၁ဒသမ၁၃သန်းဖြင့် ပြေးဆွဲမည်ဟုသိရသည်။ ခံ့ညား ပြီး သိက္ခာရှိ၍ ဂျပန်နှင့်အနောက် တိုင်းပေါင်းစပ်ထားသော ဒီဇိုင်း အသစ်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြွားဝါဖော်ပြ ထားသည်။ လာမည့်လတွင်စတင် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ လက်မှတ်များ ရောင်းပြီးကြောင်း သိရသည်။
ဘူခါရက်ခရိုင်၌နေထိုင်ကြ သည့် ခွေးချစ်သူ ရိုမေးနီးယား များအနေဖြင့် အဆောက်အအုံ တစ်ခုလျှင် ခွေးလေခွေးလွင့်တစ် ကောင်သာ မွေးမြူကြရန် ကြာ သပတေးနေ့တွင် အာဏာပိုင် များက ပြောကြားလိုက်သည်။
ယခုအခါ အငြင်းပွားဖွယ် ရာခွေးလေခွေးလွင့်များကို နှိမ် နင်းလျက်ရှိနေသည်။
အဆောက်အအုံ၏နောက် ဘက်တွင် မွေးစားသည့်ခွေးအ တွက် လှောင်အိမ်တစ်ခုထားနိုင် သည်ဟု အဆောက်အအုံနေ ၅၁ရာခိုင်နှုန်းသော ပြည်သူများ က သဘောတူထားကြကြောင်း ခရိုင်မြို့တော်ခန်းမ၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်၌ဖော်ပြပါရှိသည်။
များစွာသောရိုမေးနီးယား တို့သည် ခွေးလေခွေးလွင့်များအား ကျွေးမွေးထားပြီး အတူနေခွေး များဟူ၍ပင် ခေါ်ဝေါ်လာသည်။
ဤသို့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် မှုဖြစ်လာရခြင်းမှာ ကြာသပတေး နေ့က ဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းခဲ့၍ဖြစ် သည်။ အဆိုပါဥပဒေတွင် ခွေး လေခွေးလွင့် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း နှစ်ပတ်ကြိုတင်၍ အကြောင်း မကြားပါက ရှင်းလင်းသုတ်သင် သွားမည်ဟု ပါရှိသည်။
ဤကိစ္စကြောင့် ပြင်သစ် တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးကာကွယ် လှုပ်ရှားသူ ဘရစ်ဂျစ်တီဘာဒို့တ် က ရိုမေးနီးယားသမ္မတ ထရီယန် ဘာဆေကူအား ဥပဒေနောက် ကွယ်မှ ရက်စက်သူဟု ကင်ပွန်း တပ်လိုက်သည်။
ဤဥပဒေမှာ လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ကျော်က ဘူခါရက်ပန်းခြံ တစ်ခုအနီး၌ ကလေးတစ်ဦး ခွေး များကိုက်၍သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။
မန်း ရတနာပုံကျောင်း နှင့် တောင်သမန်ဝန်းကျင် ၊ကျေးရွာများ ရေလွှမ်း
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းအတွင်းနှင့် တောင်သမန် အနောက်ဘက် ကန်ပတ်လမ်းဘေး တွင် ရေလျှံလျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
"ဒီနေ့(၁၄.၉.၂၀၁၃) နံနက်ပိုင်းကနေစပြီး ကျောင်းဝန်းထဲမှာ ရေတွေ လျှံလာတာ အခု ညနေ ၆နာရီကျော်အထိ ကျောင်းဆောင်တွေရဲ့ ပထမအထပ်ထဲကို ရေတွေ စ၀င်နေပါပြီ။ လာမဲ့ရက်ပိုင်းမှာ စာမေးပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြေဖို့ ရှိတော့ ဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲ မသိသေးဘူး။ ဆရာမတို့ကတော့ ဌာနက ပစ္စည်းတွေ ရေစိုမှာဆိုးလို့ အပြင်ကို ထုတ်နေရတယ်။" ဟု News of Myanmar သို့ ပြောသည်။
ခန့်ရေဘေးဒုက္ခခံစားနေရကြောင်း လည်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
ပညာလိုလားသူတွေအတွက် သတင်းကောင်းတပုဒ်ပါ။ ခေတ်မီ ပွင့်လင်းလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်း ကာ အွန်လိုင်းက ဒီပလိုမာတွေပေးနေပြီဖြစ်သလို ဒီဂရီတွေလည်း ပေးဖို့ ပြင် ဆင်နေ ပါပြီတဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုအခါ ပညာရေးကို ဦးစားပေး မြှင့်တင်နေ ချိန် ဖြစ်လို့ ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဥပဒေရေးရာ ဌာနက အွန်လိုင်းကနေ ဥပဒေ ဒီပလိုမာ ယူလို့ရပါပြီလို့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ၀က် ဆိုက် မှာ မနေ့က သတင်းတပုဒ် က ဆိုပါတယ်။
ဒီနှစ် ဒုတိယ အသုတ် ဒီပလိုမာသင်တန်းမှာ ပထမ နှစ်ဝက်ဖြေဆိုသူ ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဒုတိယ နှစ်ဝက်ဖြေ ဆို သူ ၅၄ ဦး ရှိ တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံ
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ ဒီကနေ့ မနက်က နေပြည်တော်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ်တွေ့ဆုံကြပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦးမင်းဇေယျာ၊ ဦးဌေးကြွယ် တို့ ပါဝင်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး
တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးတင်နိုင်သိန်း၊ ဦးခင်ရီတို့နဲ့ ၂ ဖက် အမြင်ချင်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း
အချိန်အတော်ကြာ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဓိက အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြတာမှာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် အခြေခံအားဖြင့် သဘောထား တူညီတာတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်လို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ က ပြောကြပါ တယ်။
ဒါပေမယ့် ဆွေးနွေးချက် အသေးစိပ် ကိုတော့ မပြောကြသေးပါဘူး။
မကြာသေးမီက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာတော့ ၈၈ ငွေရတုပွဲတုန်းက ရင်တမမ ဖြစ်ခဲ့ရတာ ထုတ်ပြောသွားခဲ့သလို ၈၈ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်တာကိုလည်း နမူနာ
ဥပမာ- ထမင်း/ဟင်းချက်ရင်းTVကြည့်နေတုံး ဖုန်းလာရင်အမျိုးသ္မီးတွေဟာ
ပြီး TVကိုခဏရပ်ထားတာ(သို့ )TVမှအကြည့်လွှဲပြီးဖုန်းကိုဘဲအာရုံစိုက်ပြော
လိမ်တဲ့အခါမှာမိမိဘက်ကပိရိနိုင်ဖို့ (သို့ )မလိမ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
သူတို့ ရဲ့ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်အနေအထားတွေကို အပြင်ပန်းအနေအထားအရ
၇၀% ၊ စကားပြောဆိုပုံအရ ၂၀% နှင့် ပါးစပ်ပေါက်ကိုကြည့်ပြီး ၁၀%
လိမ်မယ်ဆိုရင်တောင်မျက်နှာခြင်းဆိုင် လိမ်ဖို့ မကြိုးစားရင်ကောင်းပါတယ်။
အမျိုးသ္မီးတွေဟာ သူတို့ ခင်ပွန်း(သို့ )ရည်းစားကောင်လေးတို့ နှင့်
ဒီအချက်(၅ချက်)ကတော့ စုစုပေါင်းအချက် (၁၀ချက်)ထဲကမှ
ယနေ့ အတွက် (၅ချက်)ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးပိကို ဓာတ်ဆားပက်ထားမထား ကိုသိချင်ရင်
အဲဒီ ငါးပိကို သေချာကြည့်ရှုလေ့လာပါ။
အရည်တွေ အရမ်းထွက်နေမယ်ဆိုရင် မသင်္ကာစရာကောင်းနေပြီ။
ငါးပိအထဲက ငါးရဲ့ကျောရိုးဟာ ရိုးရိုးပုံမှန်ဆိုရင်
လက်နဲ့ ဖျစ်တာနဲ့ ကြေမသွားဘူး ကွဲမသွားဘူး မာတယ် ... တဲ့။
ဒါပေမဲ့ ဓာတ်ဆားပက်ထားရင် အဲ့ဒီအာနိသင်ကြောင့်
လက်နဲ့ ဖျစ်ကြည့်ရင် ကြေကုန်တယ်ဆိုပဲ။
[ဧရာဝတီသား ကိုဟန်မိုး၏ Comment အား အခြေခံရေးသားပါသည်။]